जो Molokans हो: इतिहास र विश्वासको नींव
असामान्य शब्द भनिन्छ मान्छे को एक निश्चित समूह सुनेपछि, हामी Molokans र किन उनि त भनिन्छ जो जान्न चाहन्छु हुनेछ। यो शब्द दूध संग गर्न केही छ जस्तो देखिन्छ। र यो सत्य हो। हुनत केही नाम को मूल को संस्करण, तर तिनीहरू सबै यो पेय संग जोडिएको केही तरिका छन्।
यसैले, Molokans गर्ने हो? यो साधारण विश्वाससित मानिसहरूको समूह हो। Molokanism - आध्यात्मिक मसीहीधर्म शाखा को एक। को xvi शताब्दीमा मान्छे अर्थोडक्स चर्च को कार्यहरू संग dissatisfaction व्यक्त गर्न थाले। तिनीहरूले परमेश्वरको विश्वास गर्न जारी भए तापनि परम्परागत समारोह, प्रतीक, पुजारीहरू र पनि बाइबल सृष्टिकर्ता संग सहभागिता मा तिनीहरूलाई अनावश्यक मध्यस्थ जस्तो गर्न थाले। त्यसैले तिनीहरू एक समुदाय मा coalesce र आफ्नै नियम र कानून द्वारा बाँच्न थाले। र XVII सताब्दी गर्न, त्यस्ता मानिसहरूलाई थप र थप हुँदै गइरहेका छन्। यो घटना बारे चिन्तित भएको अधिकारी, केन्द्रीय प्रान्त बाट टाढा, यस्तै विश्वास भएका मानिसहरू निकाल्नु गर्न, छ, यो सामना गर्न थाल्छन्। यो गर्न, Tauride प्रान्तमा नदी डेयरी को किनारमा चयन गर्नुहोस्।
सायद यो स्थान भविष्यमा यो समुदाय को सदस्य को नाम दिए। केही अनुसन्धानकर्ताहरूले, जो Molokans व्याख्या गर्दा, भने पनि यी दिनमा, विशेष पिउने दूध मा चर्च स्थितिहरू पालना छैन र डेयरी उत्पादन खान गर्ने, मान्छे। साथै, समुदायको सदस्य, जबकि सेना वा आफ्नो गाउँ बाट टाढा अन्य स्थानहरूमा, सही भोजन प्रतिबन्धित गरिएको छ जो पोर्क वा रक्सी, थप्न गर्नुभयो भन्ने सुनिश्चित गर्न, डेयरी उत्पादन खान रुचाउँदैनन्। तर, यो कि शब्द शुद्ध दूध को मानिस को लागि ठूलो महत्व बताउनुभयो पहिलो Epistle देखि सेन्ट पीटर को वाक्यांश संग नाम सम्बन्धित विश्वास छ। रूपमा तत्संबंधी Molokans बुझ्ने , धर्मशास्त्र जो बाँच्न खोज्नुभएको आदेशहरू द्वारा। यो पनि ज्ञात छ र बोट - Molokans तातार - तर यो शायद यस लेखमा प्रश्न समुदाय को नाम संग गर्न छ।
तर, लिंकमा Tauride प्रान्त सरकार रोकियो गरेको छैन। को Molokans नयाँ ठाउँमा बसे 35 वर्ष पछि, तिनीहरूले फेरि निकाल्नु गर्न थाले। यो समय काकेशस को क्षेत्र मा। त्यो आर्मेनिया मा Molokans थिए गर्नुपर्छ। तिनीहरूले समुद्र स्तर माथि 2000 मीटर को ऊंचाई मा, हिमाल मा बसोबास थियो। यो जलवायु त्यहाँ कृषि लागि प्रतिकूल थियो, तर यो गतिविधि अब Molokans गर्न केन्द्रीय छ। त्यसैले यो देशमा टाढा समुदायको सदस्यहरूले Inhabited। चाखलाग्दो कुरा, तिनीहरूले स्थानीय जनसंख्या संग मिश्रण छैन र केवल आफूलाई बीच विवाह गर्न। निस्सन्देह, तिनीहरूले यो भूमि मा खुट्टा सेट देखि वर्ष मा Molokans संख्या, एकदम कम छ। बैंगनी - अब आर्मेनिया केवल एक गाउँ Molokans को सम्पूर्ण बनेको छ। बारेमा एक हजार मानिसहरूको जनसंख्या। देर '80s मा Molokans आर्मेनिया मा लगभग 50 000 मानिसहरू थिए। Molokans हार्ड बस्थे। को काकेशस तथापि, धेरै वर्ष को लागि आफ्नो घर थियो। सायद कठिनाइको तिनीहरूले हटाउन थियो, र वर्तमान दिन आफ्नो पहिचान संरक्षण गर्न यी मानिसहरूलाई मदत।
आध्यात्मिक मसीहीहरूले - Molokans
हवाला यो धार्मिक आन्दोलन को प्रतिनिधिहरु, सरकार अनाज्ञाकारिताले डर थियो। आखिर, Molokans चर्च को नियम पालना छैन भने, यो तिनीहरूले अधिकार विरुद्ध विद्रोही भनेर सम्भव छ। हुनत, यसलाई बन्द रूपमा, जो रुचि यो शान्त मान्छे अलग बस्न। presbyter - तिनीहरूले आध्यात्मिक नेता छन्। धर्मशास्त्रको एक साधारण व्याख्या तिनीहरूले छैन हुनत सबै Molokans परमेश्वरको वचन अध्ययन, आध्यात्मिक वृद्धि खोजी र केहि गलत छैन: प्रयास गर्नुहोस्। आध्यात्मिक, इभानजेलीकल, maksimisty, staropostoyannye र अरूलाई: अतिप्राचीन समय देखि त्यहाँ धेरै समूह थिए। तिनीहरूले व्याख्या र बाइबल को धारणा भिन्न। तर ती सबै दुई ठूलो समूह विभाजित गर्न सकिन्छ। एक धार्मिक शिक्षा अन्य मा, शाब्दिक व्याख्या - प्रतीकात्मक। सबै समूहका प्रतिनिधिहरु शान्तिमा प्रत्येक अन्य संग रह र कुनै एक आफ्नो worldview आयातित छैन।
के तिनीहरूले जस्तो
तिनीहरूले एक इन्कार अर्डर आधिकारिक अर्थोडक्स चर्च द्वारा एकताबद्ध छन्। को Molokans को हुन्? तिनीहरूले गर्ने सुसमाचार, अगमवक्ताहरू आदर तर चर्च मा प्रतीक र प्रार्थना को उपासना इनकार हुन्छन्। तिनीहरूलाई अनुसार, परमेश्वरले कुराकानी गर्न, मानिस निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बसोबास उपासनाको घरहरू छन् हुनत, जहाँ तिनीहरूले प्रवचन सुन्न र गर्न भजनमा गाउन र यस्तो बपतिस्मा र विवाह रूपमा आफ्नो संस्कार केही बनाउन जाँदैछन्। पवित्र दिन मनपर्ने मनाउन। उदाहरणका लागि, ईस्टर र क्रिसमस पहिचान छैन मनाउन। Molokans, पार लगाउने छैन सन्तहरू को अवशेषहरूको उपासना छैन। तर तिनीहरूले अन्य मसीहीहरूले जस्तै, राम्रो कामहरू प्राण बचत गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गर्छन्। परमेश्वरको विश्वास उहाँलाई र सेवा - कि जीवन को मुख्य सडक छ।
रूस मा Molokans र अन्य देशहरूमा आफ्नै नियम द्वारा बाँचिरहेका छौं। सांसारिक जीवन साथै राम्रो, तिनीहरूलाई एकतामा बाँध्ने आध्यात्मिक रूपमा। तिनीहरूले नै तरिका लुगा। महिला headscarves र लामो स्कर्ट लगाउन पर्छ। मानिसहरू आफ्नो beards दाढी र untucked एक शर्ट लगाउने छैन। को बस्तियों कडाई क्रम पालन र परम्परा आदर गरिन्छ। रक्सी पनि बिदा मा प्रयोग गर्दैन। जन्मदिन मनाउन छैन। र सामान्य मा, मनोरञ्जन रुचि छैन। त्यस्ता पुस्तकहरू पढेर वा टिभी हेरेर रूपमा पनि भद्र आनन्द, को Molokans प्रतिबन्धित। तथापि, विवाह केही दिन, व्यापक मनाइन्छ छन्। यो अचम्मको छैन। आखिर, तिनीहरूले छोडपत्र गर्न निर्णय गरेका छैनन्, र यसैले यस्तो उत्सव एक जीवनकालमा हरेक पटक हुन्छ।
बच्चाहरु सार्वजनिक विद्यालय जाने। आमाबाबुले एक सानो समय सन्तान सिक्ने र गरिब ग्रेड लागि दोष तिर्नुपर्छ। साँच्चै, छोराछोरीलाई तिनीहरूले बन्दोबस्त मा बस्नेछन्, र किसान श्रम मा लगे गरिनेछ कलेज जान हुनेछैन। को पाठ्यक्रम, भौतिक राम्ररी भएकोमा इच्छा विदेशी र Molokans छ। तसर्थ, जनसंख्या पुरुष भाग शहर, मर्मत कामको लागि अक्सर भाडामा crews काम गर्न जान्छ। Molokans पनि आफ्नै हात द्वारा उत्पादनहरु को एक किसिम बेचन कमाउन। यो युवा समुदाय छोडेर कि हुन्छ र राम्रो जीवन र रोचक को खोज मा जान्छ।
आज Molokan समुदाय सबै दुनिया भर पाउन सकिन्छ। त्यहाँ अमेरिकी, मेक्सिको, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र युक्रेनमा पनि छन्। तर Molokans तातार - छैन Tatarstan बस्ने समुदाय को एक सदस्य, तर केवल तान्नु छ। रूस मा, Molokan समुदाय को मुख्य सीट को क्रास्नोडार र Stavropol क्षेत्र छ। यी समुदाय केही सदस्यहरूको लागि, मुख्य व्यवसाय यी दिन रूसी परम्परा र भन्सार, साथै जीवन आफ्नो पुर्खाहरूको व्यवस्था अनुसार संरक्षण गर्न होइन धर्म, तर संघ र अलग छ।
कुर्स्क शहर को विवरण र इतिहास
संसारको वास्तविक चमत्कार - यो प्राचीन मिश्र मा कारीगरों छ
प्राचीन संसारको इतिहास। प्राचीन विश्व को सात आश्चर्य
विवाह फोटो वा विवाह फोटोग्राफी को इतिहास
के Kristina Kristina
को भित्री विविधता एउटा तरिका रूपमा भान्सा लागि तस्वीर
प्राण के अरस्तू भने?
अपार्टमेंट मा हल मा वालपेपर: सम्भावित समाधान
विवाह टोपी: फेशन र शैली।
VAZ 2114, जनरेटर: अवलोकन, दोष, समायोजन सुझावहरू